दुई÷चार वटा मात्रै बाख्राबाट व्यावसाय सुरु गरि खसी बिक्री गरेर रु तीन करोड आम्दानी ! - PUBLIC AAWAJ-पब्लिक आवाज
दुई÷चार वटा मात्रै बाख्राबाट व्यावसाय सुरु गरि खसी बिक्री गरेर रु तीन करोड आम्दानी !
प्रकाशित : बुधबार, साउन २९, २०७६१४:१२ पब्लिक आवाज /संवाददाता
कृष्ण न्यौपाने दमौली /तनहुँको भिमाद नगरपालिका–९ भानुमतीकी नरमाया थापाले बाख्रापालनबाट मनग्य आम्दानी गर्न थालेका छन् । गत वर्ष रु आठ लाख मूल्य बराबरका खसीबोका बिक्री गर्नुभएका उहाँले त्यही रकमले अहिले घरखर्च चलाउँदै आउनुभएको छ । उहाँले ३५ वटा बाख्रा पाल्नुभएको छ । सोही ठाउँका श्रीमाया आलेले गत वर्ष रु ६ लाख मूल्य बराबरको खसीबोका बिक्री गर्नुभयो । त्यस्तै सोही ठाउँकै डिलमाया आलेले पनि गत वर्ष रु ६ लाख मूल्य बराबरको खसीबोका बिक्री गर्नुभयो । घिरिङ गाउँपालिका–५ माझकोटका नन्दवीर थापाले पनि गत वर्ष रु पाँच लाख बराबरको खसीबोका बिक्री गर्नुभयो ।
थापा र आले मात्र होइन, यहाँका अधिकांश महिलाले बाख्रापालनबाट आयआर्जन गर्दैआउनुभएको छ । तनहुँ, लमजुङ र कास्कीका बाख्रापालक कृषकले गत वर्ष खसीबोका बिक्री गरेर रु तीन करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । हेफर इन्टरनेशनल नेपाल र नेपाल एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्र तनहुँको साझेदारीमा तीन जिल्लामा सञ्चालित ‘पशुवस्तुको मूल्यशृङ्खलामा आधारित साना किसानको संस्था सबलीकरण परियोजना’ मार्फत गठन भएका नौ वटा सहकारीमार्फत कृषकले रु तीन करोड ४४ लाख १७ हजार ५५९ को खसीबोका बिक्री गरेका छन् ।
सहकारीमा आबद्ध ९०० भन्दा बढी कृषकले बढीमा रु आठ लाखसम्म खसीबोका बिक्री गरेर आम्दानी गरेको नेपाल एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक प्रेमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सहकारीमा आबद्ध कृषकले सहकारीमार्फत खसीबोका बिक्री गरेका छन् । सहकारीले कृषकले उत्पादन गरेको खसीबोका खरीद गरी व्यापारीलाई सिधै बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको थियो ।
किसानले उत्पादन गरेको खसीबोका गाउँबाटै बिक्री गर्ने र बढीभन्दा बढी मूल्य कृषकले पाऊन् भनेर सहकारीमार्फत खसी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको भिमाद नगरपालिका–९ स्थित अतिप्रिय सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष देवी मोक्तान आलेले जानकारी दिनुभयो । “मूल्यशृङ्खलाका पात्र घटाएर कृषकलाई सेवा दिन सहकारीमार्फत खसी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।
परियोजनामार्फत बाख्रापालक कृषकलाई पशु स्वास्थ्य शिविर, घाँसको बीउ बेर्ना वितरण, तालीम र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउँदै आएको कार्यक्रम संयोजक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणको तीनवर्षे कार्यक्रम सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको कार्यक्रम अहिले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
“परियोजना सञ्चालन भएपछि परम्परागत रुपमा बाख्रा पालिरहेका कृषक व्यावसायिक बनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “जसले गर्दा कृषकको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ ।” परियोजनाको अनुदान र कृषकको साझेदारीमा सुधारिएको खोर निर्माण गरिएको छ । पौडेलका अनुसार प्रत्येक सहकारीमा दुई जनाका दरले ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तयार गरिएको छ ।
भानुमतीकी दिलमाया थापाले हेफरको साझेदारीमा परियोजना सञ्चालनपछि व्यावसायिक बन्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जागेको बताउनुभयो । परियोजनाको शुरुआतसँगै उक्त वडामा सञ्चालन गरिएको आधारशिला तालीमको प्रभाव स्वरुप व्यावसायिक बाख्रापालनमा लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
आधारशिला तालीमअन्तर्गत पशु तथा स्रोतको उचित व्यवस्थापन तालीम लिएपछि गाउँमै बसी बाख्रापालन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ आएको स्थानीयवासी नरमाया थापाले बताउनुभयो । गाउँबाट बसाइँसराइ गर्ने मनसायसहित बजारमा घर किनिसके पनि तालीमको प्रभावले बसाइँसराइको योजनालाई थाती राखेर व्यावसायिक बाख्रापालनतर्फ लागेको उहाँले बताउनुभयो । “अहिले बाख्रापालनबाट वार्षिक रु आठ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाख्रापालनबाट सन्तुष्टि मिलेको छ ।”
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘एक गाउँ ः एक उत्पादनको नीति’ अवलम्बन गरिएको छ । गाउँअनुसारको सुहाउँदो खेती गर्नका लागि कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पौवा, पतेनी, ढेडेगाउँ, छापस्वाँरा, ज्यामिरेमा अमिलो र कागती, नयाँ गाउँमा सुन्तला, भाँगेमा गोलभेडा, हिलेखर्क, जालभञ्ज्याङमा टिमुर र कफी खेतीमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त गाउँबाट उत्पादित वस्तुको व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणका लागि हाटबजारको व्यवस्था मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सम्पूर्ण वडामा सहज सडक पहुँच पु¥याउने भएको छ । गाउँवासीलाई सहजरुपमा वडा कार्यालयसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन गाउँपालिकाले सडक पहुँच तथा वडा कार्यालय जोड्ने पक्की सडक सञ्जाल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो ।
छवटै वडासम्म पुग्ने सडक कालोपत्रेलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो । “गाउँपालिकाका धेरै वडा कार्यालय पुग्ने बाटो कच्ची छ”, उहाँले भन्नुभयो, “वडा कार्यालयसम्म पुग्ने बाटो कालोपत्रे गर्ने नीति अवलम्बन गरी कार्ययोजना बनाइएको छ । गाउँपालिकाले नयाँ ट्रयाक खोल्ने कामलाई नित्साहित गर्ने र गाउँपालिकाभित्रका सबै सडकको मापदण्ड, सडक सीमा कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने तयारी गरेको थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँपालिका गौरव तथा वडा गौरवका आयोजना पहिचान र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
गाउँ कार्यपालिका, वडा कार्यालयको भवन तथा विभिन्न वडामा रहेको स्वास्थ्यचौकी, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष थापाले भवन मापदण्ड आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । तीन वर्षभित्र गाउँपालिकाभित्र रहेका काठे पोललाई विस्थापित गरी सिमेन्ट तथा स्टिल पोलको व्यवस्था, सबै वडामा विद्युत् तथा सञ्चारसुविधाको व्यवस्था मिलाइने उहाँले बताउनुभयो ।
हरियाली प्रवद्र्धन, वृक्षरोपण तथा वन विस्तार एवं वातावरणमैत्री स्थानीय शासन सञ्चालनमा जोड दिँदै गाउँपालिकालाई ग्रिन सिटीको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पोखरी, तालतलैया, बरपीपल चौतारीको संरक्षण र सम्वद्र्धन, परम्परागत खानेपानीको स्रोत र मुहानको संरक्षण गर्दै पुराना एवं जीर्ण अवस्थाका कुवा तथा पोखरी मर्मत तथा संरक्षण गर्ने नीति लिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
साउनदेखि मजदुरलाई पनि तलब वितरणमा प्यान अनिवार्य !
कास्कीमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार , दक्षिण एशियाली आठ मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौँ स्थानमा